အထူးကဏ္ဍ Archives | Page 22 of 31 | Frontier Myanmar
တိုက်ပွဲများမကြာခဏဖြစ်လေ့ရှိပြီး ညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ခံထားရသည့်မြို့သည် မြန်မာပြည်၏ထိပ်တန်း ဆယ်မြို့စာရင်းဝင်ရန်အိမ်မက်မက်လျက်ရှိသည်။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရက အချက်နှစ်ချက်ကိုသာ လိုက်လျောပေးပါက သူတို့အိမ်မက်တွေအမှန်တကယ်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုလည်း ယုံကြည်နေသည်။
News, News Feed, အထူးကဏ္ဍ, စီးပွားရေး, ဆောင်းပါးကဏ္ဍ
ကိုဗစ် – ၁၉ ကာလ မြဝတီသောက
တရုတ်နှစ်သစ်ကူး အားလပ်ရက်ပြီးနောက် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း သောင်တင်နေသည့် တရုတ်လူမျိုး အလုပ်သမားထောင်ချီအား ကမ္ဘာအရပ်ရပ်သို့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့နေသည့် ဖေဖော်ဝါရီလမှာပင် ကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ်က မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ တရားမဝင် ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
ကယန်းပြည်သစ်ပါတီသည် တပ်မတော်နှင့် အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှု မရှိသည်မှာ ၂၆ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ကယန်းပြည်သူများတိုးတက်ရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး ရရှိရေးအတွက်မူ ကြိုးစားနေဆဲဟု အဆိုပါတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က ပြောသည်။
Ashley South ရေးသားသည်။
ပြည်ခိုင်ဖြိုး၏ တရားစွဲဆိုမှု ရင်ဆိုင်ရသော ဆရာ၊ ဆရာမများ
News Feed, အထူးကဏ္ဍ
ကျောက်စိမ်းတူးဖော်မှုများအား လုံးဝတားမြစ်ရန် အစီအစဉ်ရှိဟု အစိုးရက ပြောကြား
ညဖက်အနားယူနေကြသည့် ရေမဆေးကျောက်ရှာဖွေကြသူအချို့အား တွေ့ရစဉ်။ ဓာတ်ပုံ-မင်းဇေယျာ နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၈ လုံးခင်း၊ ဖားကန့် ရတနာနယ်မြေတွင် ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများအား လုံးဝပိတ်သိမ်းခြင်း၊ တားမြစ်ခြင်းနှင့် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်သွားရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က စီစဉ်ထားသည်ဟု သတ္တုတွင်း ဝန်ကြီးဌာနက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ယနေ့တင်ပြခဲ့သည်။ ဖားကန့်ဒေသတွင် ကျောက်စိမ်းများအား အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တူးဖော်နေမှုနှင့်.
img_7115_1.jpg ဧရာဝတီတိုင်း ဒေးဒရဲမြို့နယ်က ရွာတစ်ရွာမှာ PACT Global Microfinance Fund မှ ဝန်ထမ်းတစ်ဦး ငွေရေတွက်နေတာကို ကြည့်ရှုနေတဲ့ ငွေချေးသူတွေကို ၂၀၁၅ ဧပြီလက တွေ့ရစဉ်။ ဓာတ်ပုံ – ဂျော့ရှူဝါ ကာရိုး ဟန်းစ်ဟာ့စ် ရေးသားသည်။ ဝင်ငွေနိမ့်ပါးတဲ့ ငွေချေးသူတွေကို အဓိကပစ်မှတ်ထားတဲ့.
ဟန်းစ် ဟာ့စ် ရေးသားသည်။
ဆန္ဒပြမှုများကြောင့် ထိုင်းသံရုံး ကောင်စစ်ဝန်ဌာန နှစ်ရက်ပိတ်မည်
ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ထိုင်းနိုင်ငံ သံရုံးရှေ့တွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် ဆန္ဒပြပွဲများကြောင့် သံရုံး၏ ကောင်စစ်ဝန်ဌာနအား ဒီဇင်ဘာ ၂၈ နှင့် ၂၉ နေ့များတွင် ပိတ်ထားမည်ဟု ရန်ကုန်မြို့ရှိ ထိုင်းသံရုံးက ယနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ကော့တောင် (လိပ်ကျွန်း) တွင် ဗြိတိသ ျှနိုင်ငံသားနှစ်ဦးအား သတ်မှုဖြင့်.
“နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာ မူဘောင်သဘောတူညီချက်” အလုပ်ဖြစ်မလား
စည်သူအောင်မြင့် ရေးသားသည်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်က UPDJC လို့ခေါ်တဲ့ “ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှု ပူးတွဲကော်မတီ”က သမ္မတဆီကို ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံကြီး ကျင်းပမယ့် “နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာ မူဘောင်သဘောတူညီချက်” တစ်ရပ်ကို တင်ပြလိုက်ပါပြီ။ သမ္မတက အတည်ပြုပြီးရင် လာမယ့် ၂၀၁၆.
စည်သူအောင်မြင့် နှင့် Frontier ရေးသားသည်။